Wararka - Waa maxay sababta cidiyeerka cidiyahu uu aad caan ugu yahay wakhtigan?
Waa maxay sababta jelka ciddiyaha uu aad caan ugu yahay hadda?
Waa maxay sababtacidiyo jel cidiyahama caan baa hadda?Farshaxanka ciddiyaha ayaa noqday mid caan ah maalmahan.Wax dhib ah maleh Dumar ama lab, inkastoo inta badan dumarka hadda, laakiin lab ah, sidoo kale aad iyo aad u badan oo jecel in ay sameeyaan farshaxanka ciddiyaha .
Nail UV jel suufwaa la yaqaanalaabta farshaxanka ciddiyaha.Waxaa lagu horumariyaa iyadoo la isku darayo sifooyinka ciddiyaha iyo daaweynta sawir-qaadista.Waxaa lagu soo dalacsiiyay suuqa dhowr sano.Dhawr sano oo horumar ah ka dib, ciddiyaha ciddiyaha ayaa qabsaday inta badan suuqa farshaxanka ciddiyaha.Cilmi-baaris xirfadeed oo suuqa ka dib, waxaa la ogaaday in 99% goobaha lagu qurxiyo ciddiyaha ay inta badan kor u qaadaan nadiifinta ciddiyaha, in ka badan 80% dadka isticmaala ciddiyaha ayaa sameeyay cidiyaha phototherapy.
Waa maxay sababtacidiyaha jelsi caan ah suuqa?Waxa aan falanqeeyay cilmi-baadhistii suuqa oo aan soo koobay tobanka sababood ee ay ciddiyaha cidiriyadu caan uga yihiin suuqa.
1. Go'i kara, ur la'aan, caafimaad qaba oo aan waxba yeelin ciddiyaha.Isticmaalka cidiyaha khaaska ah waxay qooyn kartaa oo ku dhici kartaa wakhti gaaban gudaheed, iyada oo laga fogaanayo waxyeellada ciddiyaha ee ay sababto in lagu shiido baararka ciidda.
2. Way ku habboon tahay oo dhakhso badan, hadda ma sii adkaanayso sida ciddiyaha sawir-qaadista, saddex tallaabo, shan iyo toban daqiiqo si loo dhammaystiro ciddiyaha farta (suulka).Ciddida cidiya oo leh nalka 18W LED, ilaa 10 ilbiriqsi si aad u engegto.
3. Faa'iido ayaa kor u kacday.Dhalada 15ml ee cidiyaha ah waxay samayn kartaa 25-30 lammaane oo ciddiyo ah, laakiin khidmadda ayaa dhowr jeer ka badan tan cidiyaha.
4. Mawduuca farsamada hooseeya, manicurists waxay shaqeyn karaan ka dib tababarka fudud.Tusaale ahaan, hawlgalka Newcolorbeauty moodada ciddiyaha ciddiyaha, xitaa kuwa cusub ayaa midabayn kara, waxaana lagu hayn karaa bil si aan caadi ahayn.Sababtoo ah hagaajinta degdega ah ee tayada ciddiyaha ciddiyaha, manicurists waxay ka fogaatay dhibaatooyin badan oo hawlgal ah.
5. Wakhtiga haynta wuu ka dheer yahay kan ciddiyaha si looga fogaado cabashooyinka macaamiisha.Guud ahaan, wakhtiga haynta waa ilaa 30 maalmood.
6. Waxa uu noqon karaa dhumuc ama dhumuc, waxaana loo bedeli karaa hadba sida ay cimiladu u beddesho.Waxay leedahay wax-qabad heersare ah oo heersare ah iyo qaab-dhismeed sida cidiyo-cidida oo kale.Laakiin mar alla intaad iftiinka arkin muddo dheer, ma dili doono.
7, midabka sare ee saturation, fududahay in la midabeeyo, si toos ah ayaa loo isticmaali karaa rinjiyeynta, sawirida, khadadka.Kuwa gudaha waa midab labada dhinacba, midabkuna waa buuxaa.Suuqa Japan, hal dhinac ayaa caan ah.Sidaa darteed, xabagta ciddiyaha gudaha waxaa loo isticmaalaa burush, iyo xabagta ciddiyaha Japan waxay ku jirtaa dhalada furan, iyo qalin-yaqaannada sawir-qaadista ayaa loo isticmaalaa in lagu midabeeyo.Tani sidoo kale waa xabagta ciddiyaha gudaha guud ahaan waa dhuuban, xabagta cidiyaha shisheeye waa qaro weyn.
8. Wax dhimis eber ah, toban farood (suul) waa la qali karaa isku mar.Macaamiil badan ayaa soo sheegay in alaabada ka timid soosaarayaasha kala duwan ay leeyihiin heerar kala duwan oo hoos u dhac ah.Tan waxaa inta badan sababa xabagta sabbaynaysa oo ay soo saarto qalabka hore ee phototherapy ee la isticmaalo iftiinka ka dib.Markaa baallaha laga saari karo ayaa aad muhiim u ah.
9. Wax roobab ah ma jiraan, eber huruud ah, iyo iska caabin cimilo.
10. Waxaa jira noocyo badan oo la kala dooran karo, qof walbana wuxuu go'aansadaa hadba dookhiisa iyo meelaynta qiimaha.InkastooCidiyaha UVwaa caan, waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho qaar ka mid ah faahfaahinta farshaxanka ciddiyaha, sida isku-dhafka midabada iyo dharka, iyo shuruudaha isbeddelka xilliyeedka ee qaababka caanka ah , Is-waafajinta deegaanka shaqada, iwm, waxaad u labisan kartaa si qurux badan oo tus moodada quruxdaada iyo qaabkaaga!
Hadday sidaas tahayganacsiga ciddiyaha jel, waxa ay iimayl ugu diri kartaa:
Waqtiga boostada: Meey-21-2022